RIYAHA NUBIINKA: SHARAXAADDA CALEEMAHA, DABEECADAHA GUUD, WIXII AY KU HAYAAN, CAANO BADAN OO AY BIXISO - RIYAHA XOOLAHA
Ugu Weyn Ee Riyaha xoolaha
Naadiga riyaha Nubi: sifooyinka gaarka ah ee guriga lagu hayo
Riyaha Nubian waxay soo saari karaan ilaa tan caano ah sannadkii, sidaas darteed ilbaxnimadani waa mid aad u qiimeeya ariga riyaha. Xitaa caanaha qibrada leh way sii hayn karaan. Waxa ugu muhiimsan waa in la ogaado waxyaabaha gaarka ah ee dayactirka iyo nafaqada xayawaanka. Aynu si fiican u baranno ilamaha dhow.
Caanahan waxaa loo caleemo saaray Ingiriisi, kaas oo magaca rasmiga ah u muuqday - riyaha Anglo-Nubiiga. Inta badan hiddaha hiddaha ayaa ka soo baxay riyaha Afrika, waxayna sidoo kale leeyihiin dhiigga Swiss iyo kan Hindiya. Isku dhafkan isku dhafan ee noocyada kala geddisan wuxuu gacan ka geystay abuuritaanka muuqaal waxtar leh.
Bilawga cusubi waxay xiiseynayaan inay bartaan sifooyinka riyaha taranta, sida loo doorto riyaha, sida loo ilaaliyo riyaha xilliga jiilaalka.
Maraykanku wuu sii waday - wanaajiyay taranka. Waxay adeegsadeen habab toosan oo xiriir la leh. Sidaa darteed, wax soo saarka xoolaha si weyn u kordhay, waxayna bilaabeen inay bixiyaan caano badan, iyada oo aan lumin miisaanka jirka guud.
Cayayaanka ayaa yimid Ruushka qarnigii 21aad. Ilaa hadda, jumladuhu waxay indhaha ku haysaa iyada oo isku dayaysa inay hesho siyaabaha ugu fiican ee lagu qeexi karo. Ma aha oo kaliya khiyaali ah oo ka soo horjeeda, laakiin sidoo kale qiimaha - laga bilaabo 120 kun oo roon, marka riigga caadiga ahi yahay ilaa 20 kun.
Waa muhiim! Riyahaasi ma laha ur ur ah xitaa inta lagu jiro xilliga maadada. Waxaa intaa dheer, waxyaallaha kaliya ee xayawaankani ma heystaan ​​urta ariga oo u diida dad badan.
Tilmaamaha dibedda iyo jihada jilicsan
Jihada ilamaha - hilibka iyo caanaha. Caadi ahaan, riyaha waxaa loo hayaa caanaha oo keliya, maadaama hilibka badanaa uu yahay mid adag oo aan fiicneyn. Laakiin xaaladdan xaaladdu waa ka soo horjeeda - hilibka waa mid aad u casiir leh oo jilicsan.
Ka hor intaadan iibsan xayawaan sida jilicsan oo saafi ah, oo isku dhafan, waa in aad hubisaa xaqiiqada. Si arrintan loo sameeyo, fiiro gaar ah u leh sifooyinka kuwan dibadda ah:
waxa loogu yeedho "Giriigga Giriigga" ama sanka qalloocan waa astaamaha ugu muhiimsan ee taranka;
dhegaha badan oo dhaadheer, oo la barbardhigay dhegaha xiddigaan;
midabka wuxuu noqon karaa cadaan ilaa madow, oo leh kala duwanaansho kala duwan oo ah brown, midabo bunni ah;
dhogorta ayaa ka sheegi doonta caafimaadka xayawaanka - jilicsan oo iftiin leh, gaaban;
qoorta waa dheer yahay, madaxa waa mid dhexdhexaad ah;
dhererka haweenka illaa 80 cm, iyo ragga ilaa 1 m;
xayawaanka miisaankoodu yahay 45 ilaa 120 kg;
riyo marwalba waa geesahooda.
Roodhadhka Afrikaanka ah ee la isku qurxiyo, dhogorta ayaa si aad ah u dheeraa tan ka mid ah taranka, oo lagu qasi jiray qaraabada alpine. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la fiiriyo marka aad soo iibsaneyso, haddii aad qorshaynayso inaad bilowdo dhab ah.
Riyaha Nubian sidoo kale way ka duwan yihiin kuwa kale dabeecadooda - qaylo, firfircoon, madax adag, oo leh dulqaad. Iyadoo ay taasi jirto, waxay u hoggaansamaan dadka, sidaas darteed waxay u baahan yihiin saynis aad u culus, oo aad u adag. Xayawaanka ayaa isaga u qaadi doona hoggaamiyaha baakadka. Inta badan riyaha way ka jawaabaan naaneysta.
Waa muhiim! Waxaa lagama maarmaan ah in la ilaaliyo ariga Nubiinka oo kaliya oo leh wakiillo ka socda noocaan. Qaar kalena waxaa jiri doona iskahorimaadyo shakhsiyaadku waxay u dhaqmayaan si firfircoon, taas oo saameyn xun ku yeelan karta kicinta.
Sida loo adkeeyo qabowga
In riyaha Nubian ee dhiigga jacaylka kulaylka - ku hay dalalka leh cimilada qabow iyada oo aan daryeel wanaagsan ma shaqeyn doono. Xaalado xun, xayawaanku way dhiman doonaan. Waxay u baahan yihiin inay bixiyaan baraf diiran, ballaaran oo dabacsan.
Intee in le'eg ayuu caanaha siinayaa?
Xayawaanka, wax soo saarka caanaha oo sareeya - laga bilaabo wanka ugu horreeya waxaa la heli karaa ugu yaraan 3 litir. Nuujinta soconaysa illaa 300 maalmood, taas oo u oggolaanaysa milkiilayaasha in ay si weyn u soo saaraan wax soo saarka oo ay ku kasbadaan wax badan. Sheyga laftiisa ayaa loo arkaa mid aad u faa'iido leh. Waxyaabaha baruurta waxay ku kala duwan yihiin 4.5% ilaa 8%. Kala badh waa protein. Caanahan waxay soo saartaa caanaha sarreeya. Waa badeecad cunto oo ku haboon dadka qaba xasaasiyadda xasaasiyadda, dadka qaba cudurrada caloosha ku dhaca, sonkorowga iyo cudurrada beerka.
Waa mid xiiso leh in la ogaado inta le'eg ee caanaha riigtu bixiso maalin kasta, haddii mashiinka caanaha uu faa'iido u leeyahay iyo sida loo doorto si sax ah.
Tani waxay noqon doontaa mid adag in lagu noolaado cimilada qabow. Dareemka heerkulka badani waa wax aan la aqbali karin. Sidaa daraadeed, dalalkaas waxaa lagama maarmaan ah in ay bixiyaan dhammaan xaaladaha nolol caadi ah ee barn ama barn. Sidaa daraadeed waxay diidan tahay in ay la xiriirto "Nubians", sababtoo ah xitaa khaladaadka ugu yar wuxuu keeni karaa dhimashada carruurta iyo dadka waaweyn.
U hubso in gurigaagu noqdo mid firfircoon oo diiran. Waxaad u baahan tahay inaad hubiso in aysan jirin wax qorshe ah. Waa inay jirtaa hawo wanaagsan oo qolka lafteeda ah. Qoyaanku sidoo kale waa wax aan la aqbali karin - sababtoo ah, xayawaanka ayaa qaadi kara oof-wareenka.
Baro sida riyaha lo'du ay u tarmaan Lamancha, Alpine, Zaanenskaya, Latvian, Meyada romney.
Waayo, habeenkii oo qoryaha lagu duugo qorraxda. Waxay u baahan yihiin in la nadiifiyo inta badan ee suurtogalka ah - waa jilitaan hammi ah, oo si fudud uma seexan karaan dhulka wasakhaysan. Sidaa darteed, qashin-biyoodku waa in si joogto ah loo beddelo. Maskaxda ku hay in weli ay lagama maarmaan tahay in "Nubiyaanka" ay cuni karaan midhaha ugu fiican ee cusub iyo laamaha.
Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad sameysid jadwal galis, sidaa darteed xayawaanku ma laha diiqad. Caanaha qashinka ah ee caanuhu waxay keeni karaan xadgudub ku dhaca nuujinta, taas oo hoos u dhigaysa hoos u dhaca qiimaha alaabta.
Ma taqaanaa? Dadku waxay riyaaqeen riyaha, waxayna bilaabeen inay isticmaalaan caanahoodu in ka badan 10 kun oo sano ka hor.
Waxa la siinayo
Tayada cuntada xayawaanku waxay ku xiran tahay dhalidda caanaha. Waxay ku quudiyaan riyaha 3 jeer maalintii, gaar ahaan xeerkan waa in aan lagu buuqin xilliga qaboobaha. Ilaa 5 kg oo hilib ah, 2 kg oo ah qasacadaha miraha iyo khudaarta qiyaastii 1 kg ayaa loo baahan doonaa maalin kasta.
Qof kastaa waa inuu helaa 300 garaam oo hadhuudh hadhuud ah oo aan ku guuldareysan. Waxaa intaa dheer, tilmaamahan waxaa lagu daray 250 g halkii 1g oo ah dhalidda caanaha. Waxay quudiyaan laanta sifaha, xayawaanka, linden, soodhada, acacia. Waxay sameeyaan suufka. Waa lagama maarmaan in la siiyo ari iyo miro - kuwani waa dalag caano ku salaysan.
Waa waxtar leh in la ogaado waxa riyaha cunaya iyo sida loo quudiyo riyaha xilliga jiilaalka.
Ku dar cuntada iyo fitamiino-macdanta iyo feeraha. Cuntada ugu dambaysa waa in ay ku jirtaa gudaha dadweynaha sanadka oo dhan. Iyo sidoo kale xilliga qaboobaha ee biyaha diirran cabitaan xoogaa cusbo ah.
Awoodda iyo tabar darrada
Wareegtu waxay leedahay sifooyin gaar ah oo ka kooban mawduuca, taas oo ka dhigaysa waxoogaa adag in la daryeelo. Waxaan kala saaraynaa faa'iidooyinka soo socda ee taranka:
muddada nuujinta dheer;
wax soo saarka caanaha;
Caanuhu waxay leeyihiin waxyaabo dufan leh oo loogu talagalay samaynta tufaaxa tayo sare leh;
Riyo miisaan culus leh, iyo hilibkoodu waa jilicsan yahay oo cunto ah;
xayawaanno waaweyn oo waaweyn;
ilaa 3 qof oo qashin ah.
VIDEO: HESHIIS KU HELI KARO NUBIAN GOATS Lagu qiimeeyo lana yiraahdo:
cunto gaar ah ayaa u baahan kharashyo badan;
waxaa si gaar ah loogu hayn karaa xayawaanka iyo qaraabada kale;
xayawaanka cagaaran iyo midabada leh ayaa u badan inay ku dhacaan cayayaanka;
Ma taqaanaa? Afkaarta "scapegoat" waxay ka timaadaa Cibraaniga. Maalin maalmaha ka mid ah, wadaadka sare ayaa gacmihiisa saaray madaxa riyaha la doortay, sidaas awgeed ayaa loo wareejiyay dembiyadii dadka. Ka dib xafladda, xayawaanka ayaa loo sii daayay cidlada.
Riyaha Nubian waxaa loo isticmaalaa caanaha iyo wax soo saarka hilibka. Waxaa jira waxyaabo badan oo faa'iido leh oo ku taraya xayawaankan, oo ay ku jiraan maqnaanshaha urta iyo dhalidda caanaha oo sarreeya. Laakiin xayawaankani waxay aad u doonayaan xaaladaha xabsiga, sidaas darteed daryeelkooda waxay u baahan yihiin xoog iyo kheyraad badan.
Waa maxay neefka hurdada ee orchid iyo sida loo toosiyo si sax ah?
Dhir canabkuna wuxuu caan ku yahay beertu - "Kesha"
VIDEO: karinta at-jikada - maraq lentil ah
Sidee boogtu waxtar u leedahay: daaweynta iyo sifooyinka faa'iido u leh jirka bini'aadamka
Vervain ampelous: beerashada iyo daryeelka
Markaad kordhisid tamaandhada dhul furan, waa inaad raacdaa shuruudaha qaarkood. Si aad u hesho dalag tayo sare leh ee yaanyada, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo abuur ah ee kala duwan, si loo abuuro xaaladaha ugu fiican ee fruiting badan. Tixgeli xiga sidii loo beeray yaanyada iyo waxa la sameeyo si ay u koraan miraha caafimaad leh iyo mid dhadhan fiican leh. Read More
Waxaan dhisi karnaa aqal-karkhin qajaarka leh gacmaheena: sifooyinka koraya ee sanadka oo dhan
Burooyinkeeda Birta: waxa ay ka caawiyaan iyo waxa ay u dhaqmaan, sida loo soo dhejiyo oo loo daboolo
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Riyaha xoolaha 2020